MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-06-02
at 6/08/2013 06:19:00 PM No comments:
at 6/08/2013 03:34:00 PM No comments:
at 6/08/2013 03:32:00 PM No comments:
at 6/08/2013 03:29:00 PM No comments:
at 6/08/2013 12:06:00 AM No comments:
at 6/07/2013 10:53:00 PM No comments:
at 6/07/2013 10:29:00 PM No comments:
at 6/07/2013 10:28:00 PM No comments:
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့က နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အဦးရှေ့မှာ မလေးရှားရောက် ကချင်အစည်းအရုံး KAA နဲ့ Burma Campaign (Australia) တို့က လူဦးရေ ၃ဝ ခန့် ပူးပေါင်းပြီး ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှု ၂ နှစ်မြောက်အဖြစ် ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမပြုရေး၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုရေး၊ စစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပေါ်လာရတဲ့ သားကောင်များအပေါ် တရားမျှတမှုရှိရေးစတဲ့ ပိုစတာတွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
at 6/07/2013 10:19:00 PM No comments:
at 6/07/2013 09:43:00 PM No comments:
at 6/07/2013 09:08:00 PM No comments:
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းအား တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) မှ ပြန်လည်စတင်ရန် ကြိုးစားနေမှုများအပေါ် ကချင် လူမှု ဖွံ့ဖြိုးကွန်ယက် (KDNG) က ကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်သည်။
ပြောင်းရွှေ့ခံ ရွာသား ၄ ဦးအား တွေ့ဆုံ၍ မေးခွန်းများ ဖြည့်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု KDNG က ဆို။
at 6/07/2013 08:53:00 PM No comments:
at 6/07/2013 07:26:00 PM No comments:
at 6/07/2013 07:24:00 PM No comments:
at 6/07/2013 07:05:00 PM No comments:
ကျနော် တို့ကသာ ဥပဒေ တွေ ပြောနေတာ... သူတို့က ဥပဒေ မှ မရှိပဲ... ဥပဒေ ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား တွေကို ကာကွယ်ဖို့ သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသူ တွေကို မဒိမ်းကျင့်တာလဲ တရားဝင် ဖြစ်မှန်း အခုတလော ပိုသိလာတယ်။
at 6/07/2013 07:04:00 PM No comments:
at 6/07/2013 08:53:00 AM No comments:
at 6/06/2013 08:24:00 PM No comments:
at 6/06/2013 05:58:00 PM No comments:
at 6/06/2013 05:52:00 PM No comments:
at 6/06/2013 05:50:00 PM No comments:
Myen Thein Sein asuya gaw sumla hte bung ai asuya langai sha re lam grau n’na dan dawng wa nga sai re. Dai ni [969 -786] Bukda hte Muslim niamanghkang hpe asuya langai hku ahkyak la n’na atsawm mai shazim ai re. Dai ni pra pra sa sa n’hkrit n’tsang masha sat wan nat jahten sharum hkawm nga ai hpe asuya Balik hte up hkang masha ni hpyen dap chye nga ai hte shanhte man kaw na zingri jahten sharun sat nga tim mu nga ninglen n’mu ai zawn galaw dan nga ai gaw sumla hte bung ai asuyaamajaw rai nga ai.
at 6/06/2013 03:50:00 PM No comments:
Ginjaw Ginra Ginwang GinjawaMasat Yan (1) Lawu Tsang Uphkang Du Majat Wunkat Hpaw Hpawng hpe, 2013 ning, June (6) ya jahpawt hkying 6:00 AM ten, Padang Ninghkawng Gawk Nu hta galaw la lu sai lam chye lu ai.
Dai hpawng hta Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Uphkang Du (Div.O) Slgk. Maji Naw Mai Hpawng Hpaw Mungga shaga nna Masat Yan (1) Lawu Tsang Uphkang Du Majat Wunkat hpe hpaw hpang sai lam na chye lu ai. Dai hpawng hta du sa ai Ginwang Ginjaw Dinggrin Komiti Salang ni hte Wunkat Jawngma ni yawng marai (70) daram sa du shang lawm ai lam chye lu ai.
at 6/06/2013 03:48:00 PM No comments:
at 6/06/2013 03:37:00 PM No comments:
at 6/06/2013 03:35:00 PM No comments:
at 6/06/2013 01:14:00 PM No comments:
at 6/06/2013 01:03:00 PM No comments:
at 6/06/2013 09:44:00 AM No comments:
at 6/06/2013 09:30:00 AM No comments:
at 6/05/2013 10:35:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ဒွမ်ဘုန်ဂရွန် (Dum Bung Krung) မှတ်တိုင်အမှတ် (၃၆) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မေလမှ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်ပွားနေပြီး ဆေးဝါးများအရေးတကြီး လိုအပ်နေကြောင်းသိရသည်။
၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးငယ်များ အယောက် ၁၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ အများဆုံး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
ဒွမ်ဘုန်ဂရွန် (Dum Bung Krung) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ရှိသော်လည်း ဆေးဝါးများမရှိခြင်းကြောင့် ယခုချိန်ဆေးဝါများအရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီး ခက်ခဲနေကြောင်း ဒုက္ခသည်ကြည့်ရှု့နေသူ ဆရာနော်ဂျာ (Sara Naw Ja) ပြောသည်။
at 6/05/2013 09:56:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများ ပိုမိုကြီးထွားလာစေကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အစီရင်ခံစာ တစောင်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်၊ ကချင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံး (KWAT) ၏ “ချောက်ကမ်းပါးစွန်းသို့ တွန်းပို့ခံရခြင်း” (Pushed to the Brink) အမည်ရှိသော အစီရင်ခံစာအား ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား စာနယ်ဇင်းကလပ် (FCCT) တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်၍ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း
at 6/05/2013 08:12:00 PM No comments:
at 6/05/2013 01:49:00 PM No comments:
ယခုတလော မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားသည့် မွတ်စလင် ပဋိပက္ခများ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့အထိ ဂယက် ရိုက်ခတ် လာပြီး မြို့ခံများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ထိတ်လှန့်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည် ။
ယမန်နေ့ညပိုင်းက ဗန်းမော်မြို့ပေါ်ရှိ မွတ်စလင်ဈေးဆိုင်များအပါအဝင် ဈေးဆိုင်များ စောစီးစွာ ပိတ်ခဲ့ကြရာ ယနေ့တွင် လူအသွား အလာများ ခြောက်ကပ်နေ သလို မြို့ခံအများစုမှာ အိမ်တွင်း၌သာ နေထိုင်နေကြောင်း သိရသည် ။
at 6/05/2013 01:36:00 PM No comments:
at 6/05/2013 01:30:00 PM No comments:
at 6/05/2013 08:45:00 AM No comments:
at 6/04/2013 08:29:00 PM No comments:
at 6/04/2013 07:28:00 PM No comments:
at 6/04/2013 03:53:00 PM No comments:
at 6/04/2013 03:48:00 PM No comments:
at 6/04/2013 02:15:00 PM No comments:
at 6/03/2013 11:26:00 PM No comments:
at 6/03/2013 11:24:00 PM No comments:
at 6/03/2013 11:23:00 PM No comments:
at 6/03/2013 08:57:00 PM No comments:
at 6/03/2013 08:56:00 PM No comments:
at 6/03/2013 03:47:00 PM No comments:
at 6/03/2013 03:39:00 PM No comments:
at 6/03/2013 11:06:00 AM No comments:
at 6/03/2013 11:05:00 AM No comments:
at 6/02/2013 12:19:00 AM No comments:
at 6/02/2013 12:18:00 AM 1 comment:
at 6/02/2013 12:16:00 AM No comments: